Havoana Los Gigantes ao Tenerife | Vaovao momba ny dia
Rehefa mandeha miala sasatra any Tenerife isika dia misy fitsidihana maromaro izay tena ilaina tokoa, ny iray amin'izy ireo dia ny Mount Teide, fa ny iray hafa dia tsy isalasalana fa momba ny hantsam-bato any Los Gigantes. Ireto hantsana tsara tarehy milentika mankany amin'ny ranomasina ireto dia nanjary iray amin'ireo toerana mpizahatany indrindra, koa ankehitriny dia manana zavatra mahaliana maro hatao eo amin'ny manodidina azy isika.
Raha mankany isika ampidiro ao amin'ny lalanay io ampahan'ny Tenerife io, avy eo dia tokony hankafizintsika ireo traikefa rehetra azontsika atao. Ny hantsam-bato avy amin'ny ranomasina dia tsy mamela ny olona tsy hiraharaha, fa tsy io ihany no mety hahaliana amin'ity faritry Tenerife ity.
1 Ahoana ny fomba ahatongavana any amin'ny harambato Los Gigantes
2 Hantsam-bato manan-tantara
3 Làlana avy any La Masca
4 Dia an-tsambo
5 Seranan'i Santiago
Ahoana ny fomba ahatongavana any amin'ny harambato Los Gigantes
Raha ny sidinao tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Tenerife South tsara vintana ianao, sahabo ho 45 kilometatra fotsiny ny hantsana. Na izany na tsy izany, eto amin'ny nosy dia tsara ny mandray fiara manofa, satria ny fitsidihana an'i Teide dia mila dia adiny iray, fara fahakeliny, satria eo afovoany izy io. Avy any Costa Adeje dia azonao atao ny mandray ny làlambe atsimo mankany amin'ny faritra Puerto de Santiago. Azo atao ihany koa ny mandeha amin'ny làlana mahazatra, satria manana lalana maromaro isika. Ny tanàna kely any Puerto de Santiago dia nipoitra niaraka tamin'ny fiatraikan'ny fizahan-tany, ary toerana mangina izy io ary ny hevi-dehibe ialan'ny sambo hahita ny hantsana. Ny zavatra iray hafa azontsika atao dia ny mankany amin'ny tanànan'i Masca hijery ireo hantsana amin'ny fomba hafa. Avy amin'ity tanàna kely ity dia manomboka ny lalan'ny fivezivezena mandritra ny adiny telo izay mankao amin'ny hantsana ary mahatratra ny morontsirak'i Masca, izay horesahintsika avy eo.
Ireo hantsam-bato ireo dia manan-danja lehibe amin'ny Gu Guines, ireo aborigines an'ny nosy talohan'ny fandresena. Ho azy ireo ireto hantsam-bato ireto dia ny 'Rindrin'ny helo' na 'rindrin'ny devoly', ny toerana niafaran'izao tontolo izao. Izany no nahatonga azy io ho teboka manan-danja ho azy ireo, izay lasa toerana iray hankafizana ny nosy amin'ny fomba hafa. Tsy ny fizahan-tany goavambe eny amoron-dranomasina irery no mahasarika ny nosy, ary lasa fitakiana ireo hantsam-bato noforonina tamin'ny vatolampy volkano ireo. Ary tsy izy ireo ihany, fa koa ny harenan'ny fanambanin'ny ranomasina sy ny manodidina ny harambato.
Làlana avy any La Masca
Raha iray amin'ireo te-hanao zavatra hafa ianao ary tsy kamo, dia tena ampirisihina hanao ilay izy dia an-tongotra izay manomboka amin'ny tanànan'ny La Masca, akaikin'i Santiago del Teide. Tena tanàna kely izy io, fa ny tanàna mahita ny asany mitombo amin'ny fahavaratra. Tsy mora ny mitondra ny làlana, satria adiny telo eo ho eo ny mandeha an-tongotra mankany amin'ny morontsirak'i Masca, mandalo eo anelanelan'ny lohasahan'ny hantsana. Rehefa tonga eo amoron-dranomasina dia misy roa azo atao. Ny iray dia ny mandeha sambo hijerena ireo hantsam-bato, izay hitondra antsika ho any Puerto de Santiago, na hivily lalana ary hiverina adiny telo an-tongotra manaraka ny lalana efa nodiavintsika. Tokony holazaina fa ny ankamaroan'ny ankamaroany dia misafidy ny dia an-tsambo, izay mamita ihany koa ny traikefa tsara tarehy.
Ny iray amin'ireo zavatra saika nataon'ny olona rehetra tao Tenerife dia ny dia an-tsambo manaraka ny hantsana miaraka am-pijerena ny trozona. Mora hita ireo feso, satria matetika no miaraka amina sambo eny an-dalana. Misy zanatany trozona ihany koa, na dia tsy dia mora idirana aza ireo, satria misy fotoana mora kokoa ny mahita azy ireo. Na izany na tsy izany, ao amin'ny tanànan'ny Puerto de Santiago azontsika atao ny mijery ny dia an-tsambo ary mankafy ny làlana. Miankina amin'ny fotoana alehanao izany, fa amin'ny traikefa, amin'ny vanim-potoana ambany dia tsy mila mamandrika ianao, satria misy orinasa maromaro ary matetika dia manana tolotra sy toerana malalaka izy ireo. Ireo fitsangantsanganana an-tsambo ireo dia mazàna vita amin'ny fijanonana amina morontsiraka kely sasany izay mipoitra eo anelanelan'ny lohasaha mba hankafy sakafo sy fandroana mety.
Ity tanàna kely ity dia nipoitra noho ny hetsika fizahan-tany any amin'ny faritra te hankafy ireo harambato. Ao an-tanàna dia afaka mankafy fiantsenana kely ao ianao fivarotana fahatsiarovana kely, na misakafo any amin'ny trano fisakafoanana maro. Manana tolotra hôtely koa izahay, raha sanatria ka te handany iray na roa andro amin'ity toerana ity izahay. Misy moron-dranomasina kely maromaro misy fasika volkano izay manosika antsika hilentika alohan'ny na aorian'ny fahitana ny hantsana sy seranana midadasika ialan'ny sambo. Ity no teboka mety indrindra hamitana ny andro mahafinaritra eny amin'ny hantsam-bato, miaraka amina fialamboly kely sy karazana serivisy rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Hantsana Los Gigantes any Tenerife
Ny morontsiraka tsara indrindra any Cancun